OVOSKOP: WAA MAXAY, SIDA LOO OGAADO UKUMAHA ISTICMAALAYA QALABKA - KUFSI
Baaritaanka ukumaha, labadaba ka hor inta aan la furin iyo inta lagu guda jiro, waa talaabooyin muhiim ah oo ku saabsan taranta taranka. Kaaliyaha wanaagsan ee arrintani waa baako - qalab kaas oo suurtogal u ah in lagu aqoonsado cilladaha, cilladaha aan caadiga ahayn, ama la socdo horumarka saxda ah ee embriyaha.
Waa maxay baakteeriyada?
Ovoskop waa qalab gaar ahiyada oo gacan ka geysaneysa kantaroolka tayada noolaha ee wax-qabadka buuxinta. Mabda'a shaqadiisu waxay ka kooban tahay in lagu sawirayo nalalka iftiinka ee ukunta kuwaas oo horay loo rakibay oo u go'an in ay ka soo baxaan dib u habeeynka baakidhka. Iftiinka iftiinka wuxuu ogaan karaa xitaa cillado yaryar.
Borotiinku waa inuu noqdaa mid hufan, iyo jiirka waa in lagu dhejiyaa gudaha si uusan u taaban darbiga. Sidaa darteed, falanqayntu waa inay fiiro gaar ah u leedahay joogitaanka dhiigga ee borotiinka, joogitaanka maqaarka ee qolofka qajaanka, iwm. Marka la eego noocyo kala duwan oo cillado ah (dildilaacyo ama waxyeelo kale oo ku jira qolofka), waxay u muuqan doonaan madow habka dibadda. dhibco ama jirro. Ku dhowaad dhammaan ovoskopov waxay ka shaqeysaa tamarta caadiga ah ee shabakada 220 V; Waxa kale oo jira fursado la qaadan karo. Inta badan, qalabka waxaa loogu talagalay tijaabinta isku mar ee ukumo badan. Waxa kaliya ee laga reebo waxay noqon kartaa qalabkale (guriga marmarka qaarkood), kaas oo kuu oggolaanaya in aad eegto hal miro.
Ma taqaanaa? Inta lagu jiro mudadii hore, kaliya wadaaddada ayaa loo dhiibay digaagga sii kordhaya ee ukunta.
Maxay yihiin noocyada?
Waxaa jira noocyo kala duwan oo loo yaqaan 'opaskop'. Waxay ku kala duwan yihiin qaabka, xajmiga iyo xajmiga alaabta buuxa, oo la arki karo waqti.
Lakin Hammer-ga ayaa magacyadan soo iibsaday sababtoo ah muuqaalkiisa.
Muxuu qoortaas oo kale u eg yahay? Qaab ahaan, waxay runtii u egtahay jilbaha. La shaqeynta nooca qalabkan waa mid sahlan. Gacanta ayaa ah badhanka shaashadda. Qalabka ku haynta qalabka, kan beerta digaaga ayaa sameynaya tarjumaadda tirada loo baahan yahay ukunta.
Ku sifooyinka Noockan ovoskopov waxaa ka mid ah kuwan soo socda:
Waxaad la shaqayn kartaa qalabka kaliya ee aan ka ahayn shabakad, laakiin sidoo kale isticmaalaya bateriga ama bateriga.
Waxaa muhiim ah in la doorto awoodda iftiinka iftiinka, sababtoo ah si loo hubiyo in ukumaha la baaro, waxaad u baahan tahay iftiin tayo sare leh. Si kastaba ha noqotee, waa inuusan qallajin karin uur-jiifinta lafteeda, sababtoo ah waa in maskaxda lagu hayo in shaqada la fuliyo waxyaallo nool.
Ugu weyn faa'iido Sawir-wareejiyaha sarreeya waxaa loo tixgeliyaa xaqiiqda ah in baaritaanka badeecadda wax lagu duubo lagama maarmaan tahay in laga helo saxanka. Tani waxay hoos u dhigeysaa tirada nadiifinta, waxay kordhisaa xawaaraha shaqada iyo, muhiimadda, waxay yareyneysaa suurtagalnimada in ay keento qalabka si looga saaro wixii waxyeello ah.
Waa muhiim! Waxyaabaha la soo dhejiyey waxaa lagula talinayaa in laga soo qaado shimbiraha da'doodu tahay siddeed bilood. Waxaa jira suurtagal hel qadar fiicanGuga iyo dayrta.
Ovopkop toosan waa ugu waxtar badan iyo inta badan la isticmaalo. Kiiska qalabka ayaa leh qaab muuqaal ah, laydhku wuxuu ku yaalaa xagga hoose. Qalabka kormeerka waxaa lagu dhejiyaa meelo gaar ah oo ku yaala dusha sare ee qoyaanka.
Waa muhiim! Waa muhiim in la doorto nooca saxda ah ee laydhka ah si looga fogaado in uu ka baxo ukunta. Badanaa isticmaal nalalka tamarta nalalka ah, oo bixiya nalka wanaagsan ee iftiinka, iyo kulaylka yar. Intaa waxaa dheer, qaar ka mid ah ovoskopakh waxaa jira meelo gaar ah oo u dhaw laydhka, loogu talagalay hawo wanaagsan.
Faa'iidada culus ee noocyadan qalabka ah waa in ukumuhu aysan u baahnayn in lagu qabsado gacmahaaga, laakiin waxaad si fudud u dul-qaadan kartaa kor. Waxa kale oo aad isku dayi kartaa oo aad baari kartaa dhowr ukun oo isku mar ah. Ovoskopov waxay ku jirtaa iibka, taas oo suurtogal u ah in la iftiimiyo afar ilaa tobantaas oo si weyn u kaydisa waqtiga. Qaabka ugu haboon ee qoyaanka tooska ah ee loo yaqaan "ovoskop vertical linear" waa mid u qalma mid ka mid ah meesha saxaarada ukunta laga saaro - waxay soo celinaysaa qaabka caadiga ah ee kaararka iibsanaya. Si loo yareeyo ukumaha baaritaanka, saxaarada kaarboon oo leh qalab loogu talagalay baaritaanka waxaa lagu daboolayaa saxaarada qoyaanka, ka dibna dhismaha ayaa loo rogay. Isla mabda'a, ukunta si fudud ayaa loo saaraa ka dib marka lagu falanqeeyo.
Ma taqaanaa? In wax soo saarka warshadaha, qalab aad u fara badan ayaa loo isticmaalaa, taas oo suurtogal u ah in la hubiyo waqti isku mid ah oo tiro badan oo ukun ah - jadwal loogu talagalay ovoscoping.
Waxaa sidoo kale ku yaalla ilaha iftiinka iftiinka qoyan ee ovoskopov hoos hoos naqshadaha iyo tilmaamidda. Isla markiiba furitaanka jeegga waa dhinac. Waxaa macquul ah in ay ukumo u muujiso ukumahaas oo kale, oo ku tiirsan godka - faa iidnimadu waa in kiiskani aysan ku dhicin, sababtoo ah iftiinka si toos ah looma amro, laakiin kor. Laakiin waxaa jira khasaare weyn oo ka mid ah qalabka noocan ah - waad ka hubin kartaa qaybta ugu badan hal mar. Ovoskopov noocan oo kale ah ayaa ka iibsada wax ka yar kuwa kale. Inta badan, nooca qalabkan waxaa gacanta lagu sameeyey. Dhab ahaantii, waa sanduuq keliya oo leh dalool iyo nalka iftiinka. Laakiin halkan waa muhiim in la fahmo in doorashadani ay tahay mid aad u badan khatarta dabkaSidaa daraadeed waa in kaliya la isticmaalo qalabka aan guban.
Haddii aad go'aansato in aad digaaga digaaga si dhab ah u culus tahay, waxaad ubaahantahay inaad udbaan qabatid, taas oo ah mid macquul ah oo aad ku sameyso gacmahaaga.
Marxaladaha qanjirka 'ovoscopy': goorta iyo sida loo ogaado ukunta
Habka ukunta ovoskopirovaniya ee noocyada kala duwan ee shimbiraha waa mid isku mid ah. Laakiin waqtiga sawirka iyo lambarka lagama maarmaanka ahi waa mid kala duwan.
Inta badan, ovoscopy ee ukunta digaaga maahan daruuri. Mudada u dhaxaysa daaweyntu waa inay ahaato ugu yaraan 4-5 maalmood.
Waa muhiim! Koontaroolka ugu horreeya ee ovoskop wuxuu ku dhacaa maalinta shanaad ee jiilaalka ukunta iyo maalinta lixaad ee hilibka.
Laga bilaabo maalinta afraad, waxaad horey u arki kartaa haddii ukunta la bacrimiyo. Marinnada dhiigga iyo xataa hooska embriyaha waa inay muuqdaan. Nuurka wuxuu noqdaa casaan.
Inta lagu jiro kormeerka labaad, allantois waa la arki karaa - tani waa xubinta neefsiga ee embriyaha, kaas oo, haddii si habboon loo horumariyo, waa in ay ku dhajiyaan dhammaan dusha qolofka gudaha iyo ku dhow dhammaadka dhammaadka. Xilliga embriyaha waa waqtigan waa mid aad u weyn, waana in lagu xiraa maraakiib dhiig ah.
Dhamaadka dhammaadka wareegista, baaritaanka ugu dambeyn ee qotodheerka ayaa la sameeyaa. Iyada oo aad ku ogaan karto miro la qaboojiyey oo guud ahaan qiimeynaya horumarka geeddi-socodka dhalidda inta lagu jiro marxaladda labaad. Embriyo xilligaani waxay ku dhowdahay meel kasta oo ka mid ah qolofka, dhammaan muuqaalkiisa waa kuwo xawaare leh, xitaa dhaqdhaqaaq yar ayaa la arki karaa.
Hoyga, shimbiraha, xayawaanka, boorashka iyo xitaa dhirta ayaa sidoo kale la rijeynayaa.
Ka hor inta aan la isugeynin waa la fuliyaa qafiska ukunta goose ah ujeedada ah in la diido kuwa kuwaas oo chicks ma noqon doonaa dillaac. Kuwaas waxaa ka mid ah kuwa ay ku jiraan qolka hawada sare (sida caadiga ah), iyo sidoo kale kuwa dildilaaca yar ee qolofka, jebiyaan qolofta jilicsan, madow kala duwan (tani waxay noqon kartaa caaryo).
Hawlaha qaboojinta ayaa la qabtaa weli laba shaashad:
Falanqaynta koowaad waxaa la fuliyaa maalinta siddeedaad. Marka aad wareegsan tahay, waxaad arki kartaa mawduucyada maraakiibta dhiigga.
Inta lagu jiro kormeerka labaad, kaas oo dhacaya maalinta afar iyo tobnaad, embriyaha qudheeda ayaa si cad u muuqata.
Waxyaabaha buuxa ee duck waxay ku xiran tahay nuqul. saddex jeer.
Nidaamka koowaad waxaa la qabtaa maalinta siddeedaad. Muuqda waa muuqaal ah marinno dhiig, oo muujinaya joogitaanka embriyaha.
Baaritaanka labaad ayaa la qabtaa maalinta 21-aad, iminka hindisaha ayaa si cad u muuqda.
Maalinta 25-aad, inta lagu jiro tarjumaadda saddexaad, waxaa suurtagal ah ma aha oo kaliya in la arko embriyaha, laakiin sidoo kale si ay ula socdaan sifooyinka horumarka. Haddii ay jiraan wax is dulsaar ah, markaa waxaa loo diidaa sida ukunta.
U fiiri ukunta turkeyga ee loo yaqaan 'ovoscope' saddex jeer.
Baaritaanka ugu horeeya waa lagama maarmaan in la qiimeeyo goobta saxda ah iyo kalsoonaanta jiirka, iyo sidoo kale si loo ogaado qiyaasta qolka hawada, taas oo aan ka weyneyn lacagta caadiga ah ee dhexdhexaadka ah.
Ovoskopirovaniya labaad ayaa lagu qabtay maalinta 8-aad ee hannaanka. Waqtigaan, embriyaha waa la arkaa, iyo shabaqa wareegga wareegga ayaa la sameeyay.
Baaritaanka saddexaad wuxuu lagama maarmaan u yahay maalinta 25aad ama 26aad. Inta lagu jiro mudadaas, ukumaha ayaa si tartiib tartiib ah u jeexjeexay. In lumen waa inay noqdaan gebi ahaan mugdi, taas oo muujinaysa joogitaanka embriyaha soo koraya halkaas.
Ovoskopirovaniya - Tallaabooyinka qasabka ah ee taranta taranta ee ukunta. Waxay ka caawisaa in ay diiddo qalab tayo wanaagsan oo tayo fiican leh marxaladda hore, iyo sidoo kale in la kormeero horumarinta embriyaha mustaqbalka.